Hoggaanka xisbiga Liberalerna oo uu buuq ka dhex abuurmay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Birgitta Ohlsson, Liberalerna. sawir: Sawirle: Adam Ihse/TT
Hoggaanka xisbiga Liberalerna oo uu buuq ka dhex abuurmay
Xagguu ku dambeeyn doonaa is-qab-qabsiga hoggaanka xisbiga L?
La cusbooneeyay onsdag 14 september 2016 kl 10.16
La daabacay onsdag 14 september 2016 kl 10.15
Qaar ka mid ah hoggaanka sare ee xisbiga Liberalerna (L) ayaa welwel ka muujiyay hab dhaqanka Birgitta Ohlsson.
Birgitta Ohlsson oo xisbiga Liberalena u metesha xubnaha baarlamanka ayaa dhaleeceeymmo u soo jeedisay hoggaamiyaha xisbiga L, Jan Björklund fikirro uu dhowaantan soo jeediyay.
Anna Starbrink, kana mid ah xubnaha hoggaanka ururka L ayaa soo jeedisay in Birgitta Ohlsson ay iska casisho xubin-nimada hoggaanka xisbiga.
- Waxaan aamin-sannahay in la kala doorto in xisbiga wax laga hoggaamiyo iyo in la noqdo ruux dibadda howlahaa ka jooga oo si xorriyad ah uga faallooda siyaasadda xisbiga. Sababtaa daraadeed ayay iila muuqataa inay jagada hoggaanka xisbiga isaga casisho, sida ay sheegtay Anna Starbrink.
Jan Björklund, hoggaamiyaha xisbiga Liberalernas oo axaddii ina dhaaftay u warramayay laanta wararka idaacadda ee Ekot ayaa soo jeediyay fikir ah in dawladdu ku casunto xisbiga Sverigedemokraterna (SD) wada-hadallada siyaasadeed ee wada-tashi ee xisbiyada mucaaradka. Hase yeeshee ay saacado dabadeed shaashadda Twitter-ka ku qortay Birgitta Ohlsson in aanay tallaabadaasi ahayn mid ku habboon in la sameeyn karo amase aan loo baahnayn in la sameeyo.
Sidoo kale maalintii xigtay oo uu hoggaamiyaha xisbigu maqaal ku daabacay war-geeyska Dagens Nyheter (DN) ku soo ban-dhigay fikir ah in la joojiyo dugsiyada mulkida loo leeyahay ee salka ku haya diimaha. Hase yeeshee ay Birgitta Ohlsson dabadeed isla war-geeyska DN ku soo daabacday maqaal lid ku ah fikirkaa, iyadoona ka hor-timid dhabbadii siyaasadeed ee xisbiga.
Ma ahan markii ugu horreeysay oo ay Birgitta Ohlsson kacdoon ka dhaliso xisbiga. Iyadoona oo ey qaar ka mid ah hoggaanka xisbigu weli ugu careeysan yihiin diidmadii inay haa ugu codeeyso bishii juun ee sannadka xeerarkii lagu adkeeynayey siyaasadda soo galootiga.
- Xiriirka wada-shaqeeyn ayaa noqonaya mid aad u liita, bulshadana waxaa ku adkaanaya inay fahmaan siyaasadda xisbiga iyo halka uu ka taagan yahay. Awoodda badankeed ayaa ku baxeeysa doodaha xisbiga ka dhex aloosan halkii ay ahayd inaannu xoogga isugu geeyno sidii aannu bulshada ugu soo ban-dhigi, ugala doodi laheyn ugana dhaadhicin laheyn siyaasadda uu xisbigu taabac-san yahay, sida ay sheegtay Anna Starbrink.
Maxay kula tahay caqabadda uu arrinkani u keeni karo xisbiga?
- Mar haddii la dareemo in aan kalsooni loo heyn shakhsi aad xisbi ku wada jirtaan, way adkaanaysaa in la wada shaqeeyo. Howlaha siyaasadda ayaa ku saleey-san kalsooni hadday noqon lahayd xisbiga gudihiisa iyo dibaddiisaba, sida ay sheegtay Tina Acketoft, ahna ku xigeenka hoggaamiyaha xubnaha xisbiga Liberalerna u metela baarlamanka.
Birgitta Ohlsson ayaa ka gaabsatay inay ka faalooto shuruudda loo soo ban-dhigey iyo inay iska casisho xubin-nimada hoggaanka sare ee xisbiga.